Mamirapiratra Any Frantsa Ny Hatsaràna Maroakanina Nefa “Fihemorana” No Iantsoan’ireo Maroakana Mpitoraka Bilaogy Izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2018 11:34 GMT
Manaitra izany. Miha-mitombo hatrany ireo mpitoraka bilaogy no niala tamin'ny fitorahana bilaogy ! Ary raha mampiseho am-pireharehana ny maha-izy azy tamin'ny famadihana ny Caftan ho sainam-pirenena Maraokana tsara tarehy ilay maraokàna mpiangaly zaitra sady mpamorona didin'akanjo, ireo maraokana sasany kosa nanontany raha toa ka an'io firenena izay lazainy fa manimbazimba ny finoany io ry zareo.
Ny fitiavan-tanindrazana Caftan
Nozarain'i Label Ash (Fr) ny momba an'i Albert Ouaknine(Fr), ilay mpiangaly zaitra sady mpamorona didin'akanjo izay nampitolagaga tao amin'ny Caroussel du louvre mifono zava-dalina tamin'ny nanolorany ireo karazana caftan Maraokana mampiseho ny maha-marolafy ny kolotsaina Maraokàna.
Tohina tamin'ny leson'ny fandeferana tany amin'ny fampisehoana tany Oiknine i Mohamed El Kortbi .
Tsy hifady hanina ianao na hivavaka na hisarona voaly !
Moar ireo mpitoraka bilaogy no nisafidy ny lohateny manaitaitra, manadino ny fiheverana fa ny sasany amin'ireo mpitsidika ny bilaoginy dia tsy mamaky lavitra ankoatra ny lohateny. Ny vokany dia hevi-diso iray momba ny toe-javatra saropady ny ananan-dry zareo. Izany no nanjo ireo mpitoraka bilaogy marobe rehefa tojo an'ity lohateny ity ry zareo ” Aorian'ny fisaronana voaly, iharan'ny tifitra ny ramadany sy ny vavaka any Maraoka”.
Raha ny marina, Said Ben Jely(Ar), ilay mpanoratra ny bilaogy(Ar) dia niresaka ireo vaovao MAFANA farany any Casablanca : noraràn'ny kaompaniam-panjakàna misahana ny fitaterana an'habakabaka Royal Air Maroc ny fivavahan'ireo mpiasany ao amin'ny biraony sy ao amin'ny foibeny. Lasibatra ihany koa ireo vehivavy misarona voaly izay miasa ao amin'ny antokon-draharaha ara-barotra, nefa tsy misy zavatra hafa (hatreto?) mikasika ny Ramadany.
Naneho ny fahitany ny momba ity olana ity tao amina lahatsoratra iray voalanjalanja kokoa i Samir.
Raha misy mpiasa hita fa manararaotra ny tombotsoa amin'ny fahazoana mivavaka, dia tsy tokony hampiasaina hanohitra ny hafa mba hanalàna ny zon'izy ireo izany. Angamba mety hamaha olana ny fiatoana aminà fotoana fohy voafaritra hanaovana fotoam-bavaka. Mety misy fomba hafa ihany koa hamahàna io olana io, raha toa ka tian'ireo lehibe ao amin'ny kaompanian'ny fitaterana an'habakabaka. Ny fandraràna ny olona tsy hanaja ny fomba fivavahany ary ny adidiny dia fanosehana lavidavitra kokokoa ny maha-laika.
Vetivety foana dia narahana “jihady virtoaly” nataon'ireo mitonona ho “mpijirika islamista” ilay fanapahankevitry ny Royal Air Maroc (RAM).
Tsy azo antoka loatra ny fahombiazan'ilay fanafihana, hoy ny soratr'i Samir, “fa rehefa nanandrana niditra tao amin'ny tranonkalan'ny RAM ny The View from Fez, dia tsy mandeha izany. Na izany aza, mety nohidian'ilay kaompania ny lohamiliny mba hamerana ny fahasimbana”.
Nanontany tena ny amin'ny antony tsy hahatafidirany ao amin'ny tranonkalan'ny RAM ilay mpanoratra ny Morocco time, avy eo hitany ny momba ilay “jihady virtoaly”.
‘Ndehana dia ataovy izay zavatra mahasoa, scriptkiddies (mpijirika tsy manana traikefa).
Fantatra fa tsy nandrara ny fotoam-bavaka ho an'ireo mpiasany ny Royal Air Maroc. Eny, fara-faharatsiny araka ny tatitr'i Samir.
Sa…Mipoaka ve io?
Misy valan'aretina virtoaly hafahafa mihanaka amin'ny mpitoraka bilaogy maroakana. ‘Ndao io antsointsika hoe ” mandra-pihaona tsy ho ela ry aretina”.
Voalohany manana an'i Larbi isika, izay ny bilaoginy(Fr) no iray be mpitsidika indrindra amin'ny tontolon'ny bilaogy Maraokana. Amin'ny alàlan'ny tononkalo no hidradradràny ny fahadisoam-panantenany.
Angamba nilofika fotsiny izany
tahaka ny enta-mavesatra.
Sa mipoaka ve izy io ?
Avy eo tonga i Houdac(Fr) izay milaza ny filàny noho ny fahabangana (Fr) mba hanavaozana ny fiarahany maharitra tamin'ny tontolon'ny rima !
Azo antoka fa hiverina hiaraka amin'ny tononkalo vitsivitsy ao am-panahiko aho… Miaraka amin'ny hazavana mamirapiratra amin'ny masoko… ary ao am-poko.
Hiandry ahy ve ianareo?
Tsy nohazavain'i Najia na Myrtus ny antony nialàny. Niala… fotsiny izy.
Nahafinaritra ilay izy, fa tsy maintsy mandeha aho izao.
Niala sasatra kely i Kugelschreiber(Fr), nandritra ny fotoana nandrenesanay ny kiakikan'ny admin_word hoe ampy ahy izay(Fr)!
Amin'ny fanoratana bilaogy, dia izany no…eny e, ankoatry ny zavatra hafa !
Eo ankilany, efa nambaran'i Laroussi tao amina lahatsoratra iray tena mazava tsara (Fr) ny fialàny amin'ny tontolon'ny bilaogy. Soa ihany, niverina (Fr) izy !
Fa, aorian'izany rehetra izany, tqy mafy manao ahoana ny “see you soon disease”. Fahafinaretana lehibe indrindra ho ahy, ary inoana fa ho anao indrindra koa !
Izay ny anio. Amin'ny Alarobia indray mifankahita Inshallah ; )
1 andro izayIsraely